स्टेजमै मिस अफ्रीकाको कपालमा आगो सल्किएपछि…! (भिडियो सहित) «
स्टेजमै मिस अफ्रीकाको कपालमा आगो सल्किएपछि…! (भिडियो सहित)
एजेन्सी, १४ पुस । विश्वमा यदाकदा अचम्मका घटनाहरु घट्ने गर्छन् । यस्तो अचम्मको घटनाको छोटो भिडियो क्लिप्स अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । जुन भिडियोमा कुनै सुन्दरीको कपालमा आगो लागेको देख्न सकिन्छ ।
यो घटना अफ्रिकाको हो । सौन्दर्य प्रतियोगिताको क्रममा मिस अफ्रीका २०१८ को ताज जित्न सफल भएकी डोरकास(Dorcas Kasinde)को कपालमा आगो लागेको हो । मिस अफ्रीका २०१८ घोषणा भएसँगै गरिएको आतिसबाजीको क्रममा उनको कपालमा आगो सल्किएको हो ।
कङ्गो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उनी मिस अफ्रीका २०१८ चुनिएकी थिइन् । खुशीले रुँदै अर्की प्रतिष्पर्धीलाई अंगालो हाल्दै गर्दा उनको कपालमा आगो सल्किएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
तत्कालै उनको कपालमा सल्केको आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो भन्दै अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । कपालमा लागेको आगो देखेपछि उनी चिच्याउँदै गर्दा अर्का एक व्यक्ति आएर आयो निभाएका थिए ।
यस घटनाको वावजुद उनी सकुसल रहेकी छिन् । आफू ठिक-ठाक रहेको भन्दै सामाजिक संजालमा एक भिडियो पनि पोष्ट गरेकी थिइन् । भिडियोमा उनी भन्छिन्,” म ठिक छु । मेरो कपाल….ठिकै छ । म अहिले राम्रो अनुभव गरिरहेको छु ।”
मिस अफ्रीका बन्दै उनले ३५ हजार डलर जितेकी थिइन् भने एक सवारी पनि उनलाई प्रदान गरिएको थियो ।